Ciidamada xoogga dalka oo horjoogayaal ku dilay Gobolka Shabeelaha Dhexe “SAWIRRO” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidamada xoogga dalka oo horjoogayaal ku dilay Gobolka Shabeelaha Dhexe “SAWIRRO”
Ciidamada xoogga dalka oo horjoogayaal ku dilay Gobolka Shabeelaha Dhexe “SAWIRRO”
Ciidanka Xoogga ayaa ku dilay horjoogayaal Al-Shabaab ah deegaanka Galka Xarareey ee Shabeelaha Dhexe
Horjoogayaasha la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Macalin Yuusuf oo ahaa Horjoogihii Maleeshiyaadka ku dhuumaalaysanayay Deegaanadaasi iyo Horjoogayaal kale.
Ciidamada ayaa intii ay ku guda jireen waxa ay howlgalka ku dileen 37 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana laga dhaawacay 20-kale, iyadoo nolosha lagu qabtay labo ka tirsan maleeshiyada Al-Shaabab, kuwaasi oo ay iminka ku socdaan baaritaanno dheeraad ah.
Taliyaha Xoogga, Jeneraal Oddowaa Yuusuf Raage ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in howlgallada ay ku baacsanayaan Maleeshiyaadka Argagixisada ah ay sii wadayaan, inta ay ka sifaynayaan Deegaannada ay Gobolkaasi kaga dhuumaalaysanayaan.
Maalmihui ugu dambeeyay ciidamada xoogga daka ayaa waxa ay la wareegayeen degaanno horleh oo ay argagixisada ku dhibaateyn jirtay dadka rayidka ah, waxaana ay ciidamada weli ku howlanyihiin sidii guud ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe looga cirib tiri lahaa maleeshiyada Al-Shabaab.
Ciidamada xoogga dalka oo horjoogayaal ku dilay Gobolka Shabeelaha Dhexe “SAWIRRO” was last modified: May 30th, 2021 by Admin
RW Rooble oo magacaabay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada
Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose oo kormeeray garoonka diyaaraddaha ee Shalaambood “Sawirro”